Oge ochie dị mma na "Térébinthes de la Justice"; N'ihi "Téréyaya Compilations", anyị nwere ihe ùgwù nke ịdabere n'oge ochie ndị mara mma mgbe egwu Africa na-enwu gbaa site na njirimara nka ya ... (VIDEO)
Site na: KongoLisolona: Ọktoba 4, 2020 00: 10 Enweghị asịsa
Egwu Africa nwere ọdịdị mbụ ya: "Africanity". Dị ka obi otiti, ụda ahụ dị mma, doo anya ma jerky. Egwú ahụ na-agba egwu kpaliri mmasị na ịtụnanya. Uwe ahụ bụ nke a na-emerụ emerụ, nke dị ùgwù, nke kwesịrị nsọpụrụ na nke na-akwanyere omume, ọdịnala na ụkpụrụ ọdịnala Africa ùgwù.
Imebiga ihe ókè, ite ihe na-enweghị isi, mkpọtụ, ebe a na-eri nri na uwe ejiji na-enweghị atụ enweghị ebe. Ndị omenkà aghara aghara, ndị na-abụ abụ na ndị na-agba egwu enweghị ikike isi. Lee ka o si bụrụ ihe magburu onwe ya n'oge a mara mma n'Africa ebe (DRC) na-enwupụta na nghọta ya niile.
Ọkt27 04: 28